Dowladda Soomaaliya : Xaalada amniga waxa ay gaadhay heer aanan gacmaha laga laaban karin | Hangool News
Dowladda Soomaaliya : Xaalada amniga waxa ay gaadhay heer aanan gacmaha laga laaban karin
April 27, 2021 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubeey oo shir jaraa’id qabtay, kaas oo si toos ah looga tabinayay Taleefishinka Qaranka ayuu sheegay in xaalada ay marayso heer aanan gacmaha laga laaban karin.
Waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay u turayeen shacabka oo ay diidanaayeen in dadka lagu dul dagaalamo, balse hadda xaalada ay gaartay heer halis ah oo ay tahay in talaabo laga qaado.
“Maalmahan waxaa magaalada kusoo kordhay dad dhaqan mooryaan leh, oo guryaha jabsanaya, oo dadka dilaya, oo aad mooddo in ay kusoo ganbadeen waxyaabihii maalmahan jirey” ayuu yiri wasiir Xundubeey oo madaxda mucaaradka ugu baaqay in aysan gabbaad u noqon kooxo aysan iyagu maamulin.
Sidoo kale waxa uu wasiirka sheegay in kooxaha Alshabaab iyo Dowladda Islaamka (IS) laga yaabo in ay ku dhex dhuuntaan waxyaabaha dhacaya.
Wasiirka waxa uu sheegay in ciidamada mucaaradka taabacsan ee ku sugan xaafadaha qaar, in dadka inta guryahooda ugu galaan u sheegayaan in ay qaxaan, kuwii diidana ay boob u geysanayaan.
Ma jirto cid madax banaan oo BBC-da u xaqiijisay sheekashooyinkaas wasiirka.
“Muqdisho waxaa loo soo raray dagaallo ay dowlado shisheeye wataan”
Wax ka ogow wasiirada xilkii waayay iyo kuwa ku cusub
Hal sabab oo uu u baaqday mudaharaadkii Daljirka Dahsoon
Wasiirka ayaa yiri “Dowladda awood ayay u leedahay in gacanta ku qabato ammaanka magaalada, balse waxaa la diidanaa in shacabka lagu dul dagaalamo, laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahanyahay in laga hortago”.
Lama oga in hadalka wasiirka uu ka dhiganyahay in dowladda iclaamisay hawlgal ka dhan ah ciidamada taabacsan siyaasiyiyiinta mucaaradka.
Dhanka kale ma jiro wax war ah oo kasoo baxay siyaasiyiinta mucaaradka, balse waxa ay dadka deegaanka soo werinayaan in dhaqdhaqaaqooda ciidan uu aad usoo xoogaysanayo.
Sawirradan ay BBC-da qaadday maanta ayaa waxa ay muujinayaan barokac ka socda qeybo ka mid ah magaalada, iyada oo dadka ay u qaxayaan xaafadda nabdoon oo ka tirsan caasimadda.